Dongeng putri salju dalam bahasa Igbo – qnc jelly gamat asli terbaik
Dongeng putri salju dalam bahasa Igbo
16 Desember 2016 10 Desember 2016 qncjellygamatasliterbaik
O ruru otu mgbe na a dị anya n’obí, e biri a mara mma adaeze. Ọ bụ nnọọ mara mma, na-acha anụnụ anụnụ anya na ogologo ntutu ojii. Ya akpụkpọ bụ ezigbo onye na-acha ọcha, n’ihi ya, ọ na-akpọ Snow White. Snow White nwere onye nnochi anya nne bụ onye mgbe nile na-ekwo ekworo na mma ya, mgbe nna ya agabigawo. Ya í bụ omume obi ọjọọ. O nwere a anwansi mirror na ike na-ekwu bụ ya bụ onye kasị mara mma umunwanyi na obodo.
Otu ụbọchị, ya onye nnochi anya nne jụrụ anwansi mirror na nke nwaanyị bụ ihe ndị kasị mma na mba. The anwansi mirror zara na Snow White bụ ihe ndị kasị mma nwaanyị. Ya onye nnochi anya nne bụ iwe oké iwe, jụziri ya, orù tufuo snow na-acha ọcha site na nke a ala-eze-. The orù jụrụ igbu snow na-acha ọcha n’ime ọhịa ma na-ejere emeghị ya. Ọ dị nnọọ were snow na-acha ọcha n’ime osisi na ekpe ya naanị ma ya onye nnochi anya nne-ya amaghi na snow na-acha ọcha ka dị ndụ.
N’ime oké ọhịa, Snow White bụ naanị ya nọ na-atụ egwu. Ọ maghị ebe ọ na-kwesịrị iso. Na mberede ọ hụrụ a quaint obere obi. Ọ na-eche bụ ndị dịrị ndụ n’ebe ahụ mgbe o kpebiri na-esi n’ime ụlọ.
Na ụlọ, ọ hụrụ 7 obere akwa na a kichin. Snow White ọcha ulo dị ka ịsa ákwà, kpochara na akwa na ndị ọzọ. Mgbe na-arụ ọrụ otú ike, ọ gara bed ma na-ehi ahu. N’ehihie, ndị asaa dwarfs onye bi na obi laghachiri n’obodo ya. O juru ha anya ịhụ na e nwere nwa agbọghọ ahụ. Otu n’ime ha waked ya elu ma jụọ ya onye ọ bụ. Snow White gwara ha ya mwute akụkọ. The asaa dwarfs nwere ọmịiko n’ahụ on Snow White na ha gwara ya ka ọ nọrọ n’obodo ha nọ n’ụlọ.
Mgbe ke ufọk edidem, mgbe ahụ onye nnochi anya nne jụrụ anwansi mirror onye ọzọ bụ onye kasị mara mma nwaanyị n’ala-eze ahu. The anwansi mirror zara na Snow White ka dị ndụ ma biri na a obere ụlọ na asaa dwarfs. Ọ ka dịkwa ihe ndị kasị mma nwaanyị na ụwa. The nnochi anya nne bụ onye iwe, ọ Planed ihe ọjọọ n’ihi na Snow White.
Mgbe ahụ onye nnochi anya nne nwogharia onwe ya dị ka otu agadi nwaanyị rere nsí apple gaa Dwarf ulo. Tupu asaa dwarfs-arụ ọrụ, ha dọrọ aka ná ntị Snow White bụghị aka imeghe ụzọ na-amabughị. Mgbe ya onye nnochi anya nne rutere n’ụlọ ahụ, o wee malite ịchụ àjà Snow White si apple. Snow White jụrụ emeghe ụzọ ma ya onye nnochi anya nne weda ya. Snow na-acha ọcha nwee ọmịiko n’ahụ ya na meghere ụzọ. O were apple si nne ya ma rie. Mgbe eri ihe nsí apple, ọ tụbọrọ na obi-ya n’ala na nsí apple on ya n’akụkụ.
Na mgbede, mgbe asaa dwarfs lọtara, o juru ha anya ịhụ Snow White dina n’ala na a icha mmirimmiri ihu na a nsí apple n’akụkụ ya. The asaa dwarfs o wutere na-ahụ Snow White nke nọ n’ọnụ ọnwụ ma ọ nwụrụ anwụ. Mgbe ahụ asaa dwarfs kpebiri ime ka a mara mma bed mere nke crystal ime ka Snow White ka dị ndụ.
Kwa ụbọchị, na-asa dwarfs nọ na-eche a ọrụ ebube ka bia Snow White nwere ike na-azụ ya nāda # mbà. Otu ụbọchị, e nwere otu njem nke bụ n’ezie onye-isi nke alaeze ọzọ na dị nnọọ anya. Ọ hụrụ otu nwanyị mara mma tọrọ on a bed nke kristal. Onye-isi-jụrụ ihe mere nwa agbọghọ na dwarfs. Mgbe ahụ dwarfs gwara ya ihe mere Snow White.
-Anụ akụkọ ahụ, onyeisi bụ nnọọ mwute. Ọ na-abịa nso ka snow na-acha ọcha. Wee nwee ọmịiko ma susuo ya. Na mberede Snow White wee. Na nkọcha na-agbajikwa site nke onye-isi nsusu ọnụ. The dwarfs nwere obi ụtọ. Onye-isi jụrụ Snow White na-abịa n’ụlọ ya na ịlụ ya. N’ikpeazụ, ha biri ndụ n’obi ụtọ mgbe mgbe.
Tulisan SebelumnyaDongeng putri salju dalam bahasa Hmong
Tulisan SelanjutnyaDongeng putri salju dalam bahasa Italia